China Silicone Masterbatch LYSI-502C Kugadzira uye Fekitori | Silike
Silicone Masterbatch (Siloxane Masterbatch) LYSI-502C inogadzirwa nepelletized ine yakanyanya kukwirira yeiyo Ultra yakakwira mamorekuru uremu siloxane polymer yakapararira mune ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA). Inoshandiswa zvakanyanya seyakanaka yekuwedzera muEVA inoenderana resin sisitimu yekuvandudza kugadzirisa zvinhu uye kugadzirisa yepamusoro mhando.
Enzanisa neyakajairika ezasi mamorekuru uremu Silicone / Siloxane zvinowedzerwa, seSilicone mafuta, silicone zvinwiwa kana imwe mhando yekugadzirisa zvinowedzera, SILIKE Silicone Masterbatch LYSI dzakateedzana dzinotarisirwa kupa dzakagadziriswa mabhenefiti, semuenzaniso,. Pasina sikuruu inotsvedza, yakavandudzwa muforoma kuburitswa, inoderedza drool, yakaderera coefficient yekukwesana, mashoma pendi uye kudhinda matambudziko, uye huwandu hwakawanda hwekuita kugona.
Chipimo chemushonga% (w / w)
(1) Kuvandudza zvigadzirwa zvekugadzirisa zvinosanganisira zvirinani kuyerera kugona, yakaderedzwa extrusion kufa drool, shoma extruder torque, iri nani kuumba kuzadza & kuburitsa
(2) Natsurudza pamusoro pehunhu senge pamusoro pekuputsika, yakaderera Coefficient yekukwesana, Greater abrasion & kukwenya kuramba
(3) Inokurumidza throughput, kudzikisira chigadzirwa kuremerwa rate.
(4) Itai kuti kugadzikana kuenzaniswa neyetsika kugadzirisa rubatsiro kana mafuta
(1) HFFR / LSZH tambo dzemakomponi
(2) EVA shangu
(3) Foamed EVA zvigadzirwa
(5) Mamwe mapurasitiki anoenderana eEVA
SILIKE LYSI akateedzana silicone masterbatch inogona kugadziriswa nenzira imwecheteyo neyeye resin inotakura yavakavakira. Inogona kushandiswa mune zvekare kusungunuka kusanganisa maitiro senge Imwe / Twin sikuruu extruder, jekiseni kuumbwa. Musanganiswa wemuviri nemhandara polymer pellets inokurudzirwa.
Kurudzira chipimo chemushonga
Kana ichiwedzerwa kune EVA kana yakafanana thermoplastic pa0.2 kusvika 1%, kunatsiridzwa kugadzirisa uye kuyerera kwesimbi inotarisirwa, kusanganisira zvirinani kugadzirwa kweforoma, shoma extruder torque, zvigadzirwa zvemukati, kuburitswa kweforoma uye nekukurumidza kupfuura mukati; Padanho repamusoro rekuwedzera, 2 ~ 5%, yakavandudzwa nzvimbo yezvivakwa inotarisirwa, kusanganisira girizi, kutedzemuka, coefficient yepasi pekukwesana uye mar / scratch uye kuramba kweabrasion.
25Kg / bhegi, bhegi renyanzvi
Kutakura sekemikari isina njodzi. Chengetedza munzvimbo inotonhorera, inofefetera zvakanaka.
Hwekutanga hunhu hunogara hwakasimba kwemwedzi makumi maviri nemana kubva pazuva rekugadzira, kana ikachengetwa mune yekuchengetedza yekuchengetedza.
Chengdu Silike Technology Co, Ltd inogadzira uye inopa yezvinhu zvesilicone, uyo akazvipira kuR & D yemubatanidzwa weSilicone ine thermoplastics makumi maviri.+ makore, zvigadzirwa zvinosanganisira asi zvisina kukwana kuSilicone masterbatch, Silicone poda, Anti-kukwenya masterbatch, Super-slip Masterbatch, Anti-abrasion masterbatch, Anti-Squeaking masterbatch, Silicone wax uye Silicone-Thermoplastic Vulcanizate (Si-TPV), kuti uwane rumwe ruzivo uye bvunzo data, ndapota inzwa wakasununguka kubata Mai Amy Wang Email: amy.wang@silike.cn
Pashure: ANTI-Pfeka MUMWE LYSI-10
Zvadaro: silimer tm 5050
SILICONE upfu LYSI-100A
SILICONE upfu S201
ANTI-WEAR MUMWE MUMWE NM-1Y